Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ)
Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) ကဘာလဲ။
မီလီယာရီတီဘီဆိုသည်မှာတီဘီအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်သောဒဏ်ရာများ(၁-၅မီလီမီတာ)ခန္ဓါကိုယ်တွင်းသို့များပြားစွာပျံနှံ့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်သည့်အခါလူး၊ဆပ်စသည့်ပုံစံရှိသည့်အစက်ကလေးများရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးတည်ရှိနေသည်နှင့်တူသည့်အတွက်မီလီယာရီတီဘီဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မီလီယာရီတီဘီသည်အဆုတ်၊အသည်းနှင့်ဘေလုံးအပါအဝင်အင်္ဂါအတော်များများကိုကူးစက်နိုင်ပါသည်။
Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
တီဘီရောဂါအားလုံး၏၂ရာခိုင်နှုန်းတွင်ရှိပြီး ပြင်ပအဆုတ်တီဘီများ၏၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပွားမှုရှိပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မီလီယာရီတီဘီရောဂါလူနာများသည်ချောင်းဆိုးခြင်း၊အကြိတ်များကြီးခြင်းအစရှိသည့် သိသာထင်ရှားခြင်းမရှိသည့် လက္ခဏာများကို ပြသတတ်ပါသည်။ အခြားသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်.
• AdrenalGlandမကောင်းခြင်းနှင့်အတူကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအများအပြားပျက်စီးခြင်း(adrenal glandသည်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့်steroidဟော်မုန်းမထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း)
• တစ်ဘက်တည်းသို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးဖြစ်နိုင်သည့် အဆုတ်လေခိုခြင်း
• ၁၆ရာခိုင်နှုန်းမှ၅၁ရာခိုင်နှုန်းသောလူနာများတွင်ကယ်စီယမ်ဓါတ်များနေတတ်ပြီးထိုသို့များပြားနေခြင်းမှာခန္ဓါကိုယ်တွင်းမှရောဂါပိုးကိုချေဖျက်သောခုခံအားစနစ်များပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။1,25dihydroxycholecalciferol(calcitriol)သည်ဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်ရန်အတွက်ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပါသည်။ မြင့်တက်လာသောcalcitriolများသည်ကယ်စီယမ်ဓါတ်ကိုလည်းများလာစေသည်။
• Choroidalအဖုငယ်များအမြင်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောပေါ်တည်ရှိပါကကလေးမီလီယာရီတီဘီဖြစ်နိုင်သည်။ မျက်လုံးတစ်ဖက်ထဲတွင်သာမကနှစ်ဘက်လုံးတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနာအရေအတွက်ကတော့တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူပါ။Chroidalအဖုများသည်မီလီယာရီတီဘီအတွက်အရေးကြီးသောလက္ခဏာအဖြစ်ဖော်ပြပြီးရောဂါရှာဖွေခြင်းတွင်အတည်ပြုနိုင်သည်။
Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မီလီယာရီတီဘီသည်Mycobacterium tuberculosisကအဆုတ်၏ပြင်ပအင်္ဂါများဖြစ်သည့်အသည်း၊ဘေလုံး၊ကျောက်ကပ်စသည်ံအင်္ဂါများသို့ပျံနှံ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတီဘီအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါပိုးသည်အဆုတ်မှပြန်ရည်ကြောနှင့်နောက်ဆုံးသွေထဲသို့ပျံနှံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာအဆုတ်တွင်ရှိသည့်တီဘီပိုးသည်လေပြွန်ငယ်ဆဲလ်များ၏အပေါ်ယံအလွှာသို့ တိုက်စားကာရောဂါပိုးကိုအဆုတ်၏သွေပြန်ကြောထဲသို့ပျံနှံခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးသည်နှလုံး၏ဘယ်ဘက်သို့ရောက်သည်နှင့်ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောလမ်းကြောင်းထဲသို့ဝင်ကာပွားများပြီးနောက်အဆုတ်၏ပြင်ပအင်္ဂါများသို့ကူးစက်ပါသည်။ ထိုအခါခုခံအားစနစ်သည်လှုံဆော်ခံရပြီးကူးစက်ခံရသည့်နေရာများတွင်ရောဂါပိုးကိုချေဖျက်သည့်အရာများဝိုင်းလာကာထိုအရာများမှgranulomaဖြစ်သွားပါသည်။
ဘက်တီးရီးယားသည်လေပြွန်ငယ်တွင်ရှိသောဆဲလ်ကိုတိုက်ခိုက်ကာအကြိတ်များထဲသို့ဝင်သွားပါသည်။ ထို့နောက်ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးနှင့်ဆိုင်သောသွေးပြန်ကြောသို့ရောက်ကာနှလုံး၏ညာဘက်ခြမ်းသို့တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်သွားကာထိုသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကလူး၊ဆပ်ကောက်နှံနှင့်တူသည့်အတွက်မီလီယာရီတီဘီ(military TB)ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တီဘီအတွက်သွေးဖောက်စစ်ခြင်း(Interferon Gamma Release Assay or IGRA)သည်အောင်းနေသောတီဘီကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ဦးနှောက်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအမျိုးမျိုး(ဦးနှောက်အမြှေးယောင်ခြင်း၊ဦးနှောက်တွင်အကြိတ်ဖြစ်ခြင်း)လဲမီလီယာရီတီဘီလူနာများတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လူနာအများစုသည်တီဘီဆေးကုသမှုခံယူပြီးသည်နှင့်ရောဂါတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါသည်။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်ပြန်ရည်ကြောမှပျံနှံသောအဆုတ်ကင်ဆာသည်မီလီယာရီတီဘီနှင့်ဆင်တူသည်ကိုရှားရှားပါးပါးတွေ့တတ်သည်။
တီဘီအရေပြားစမ်းသပ်နည်းသည်မီလီယာရီတီဘီတွင်အသုံးမဝင်ပါ။ မှားယွင်းပြီးရောဂါမရှိဟုအဖြေထွက်တာများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားတီဘီများနှင့်ယှဉ်လျှင်tuberculinဓါတ်များပြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Miliary Tuberculosis (မီလီယာရီတီဘီ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
WHOမှပေးထားသည့်စံကုသမှုစနစ်မှာisoniazidနှင့်rifampicinဆေးကို၆လသောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ပထမ၂လတွင်ethambutolနှင့်pyrazinamideကိုပါထည့်သောက်ရမည်.အကယ်၍ဦးနှောက်အမြှေးယောင်ရောဂါပါရှိပါကကုသမှုကို၁၂လအထိတိုးရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်မှကုသမှုနည်းလမ်းမှာ၉လကုသမှုဖြစ်သည်။ ဆေး၏ဆိုးကျိုးအများစုမှာအသည်းယောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူနာတွင်ဆေးမတိုးခြင်း၊ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်း၊အသက်ရှပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများလဲရှိလာနိုင်ပါသည်။
Military tuberculosis. https://radiopaedia.org/articles/miliary-tuberculosis.
Accessed November 05, 2016.Military tuberculosis. http://www.webmd.com/drugs/condition-40-Miliary+Tuberculosis.aspx?diseaseid=40&diseasename=Miliary+Tuberculosis&source=0. Accessed November 05, 2016.
Accessed November 05, 2016.